Eny, ny ankizy madinika dia tsy miahy ny amin’ny hahatongavana ho lehibe kokoa na manan-kery kokoa noho ny hafa. Koa tokony hianatra ny ho tonga sahala amin’ny zaza amin’io lafiny io ny apostoly, ary tsy hiady ny ho lehibe sy manan-kery.
Nisy fotoana hafa koa, nampisehoan’i Jesosy fa niahy be dia be ny ankizy kely izy. Volana vitsivitsy tatỳ aoriana, dia nitondra ny zanany mba hahita an’i Jesosy ny olona sasany. Nitady hampihataka azy ireo ny apostoly. Nefa hoy i Jesosy tamin’ny apostoliny: ‘Avelao ny zaza hanatona ahy, ary aza rarana; fa an’ny toa azy ny fanjakan’Andriamanitra.’ Notrotroin’i Jesosy ireo ankizy avy eo, ary nitsodrano azy izy. Moa ve tsy mahafinaritra ny mahafantatra fa tia ny ankizy kely i Jesosy?
Hizara Hizara Tia ny Ankizy Kely Izy
my tant. 94